Yaad Rabtaa Inaad La Shaqeyso? | Martech Zone
Yaad Rabtaa Inaad La Shaqeyso?
Jimco, Oktoobar 2, 2009 Jimco, Oktoobar 2, 2009 Douglas Karr
Waxaan si hagar la’aan ah ushaqeynayay usbuucyadii lasoo dhaafay si aan si dhab ah ganacsigeyga dhulka ugala baxo. Maalmaha waxaa lagu qaatay isku xirnaan iyo fiidkii / sabtiyada iyo axadaha waxaa lagu bixiyaa bixinta ballanqaadyadii aan sameeyay. Ma ahan mid hagaagsan, laakiin waa horumar. Dhaqaalahan, waan ku fiicanahay taas.
Tababarida iibka ayaa waxbadan iga caawisay - waxay iga caawisay inaan sifiican u fahmo waxa ay yihiin macaamiishayda 'baahiyaasheeda, u dajiso waxyaabaha aan ka filayo, isla markaana si dhakhso leh u xirto si arrimuhu aysan iiga jiidan ama ii gaabin. Waxaan u dhaqaaqayaa si dhakhso leh, 'kickin' badh iyo magacyo ayaan qaadanayaa Ma jirto cid iga caawisay dhiirrigelinta in ka badan saaxiibbaday, in kastoo!
Maanta waxaan leenahay a guul weyn. Dhowr meheradood oo aan si dhow ula shaqeynayay si aan u xiro fursada rajo leh tan oo ah karti. Shirkad weyn oo aan in muddo ah la shaqeynayay ayaa saxiixday qandaraas yar oo aan ku tijaabinayno awoodeena una aragno waxa aan u qaban karno. Weligay mahad baan ahay.
Saaxiibbaday markay farxadda maqleen way farxeen! Waa asxaabteyda iigu dhow kuwaa oo ilaa hada i dhiiri gelinayey, i dhiirigelinayey, i taageerayey, hogaaminayeyna bixinayey, oo aan halkaa ku sugnaa markaan u baahdo caawimaad. Ma aysan weydiisan a cut hana ka filan dime. Waxay ogyihiin in ta labaad ee aan haysto ganacsi igu filan oo aan ku wareego, waanu wada shaqeyn doonaa.
Kuwo kalena waxay qaateen qaab kale. Waxa ugu murugada badnaa ayaa ahaa shirkad kaasoo aan si qoto dheer uga taxadarayo inuu dhinac ii jiido oo aan su'aal ka keeno sababta aanan alaabtooda ugu iibin iibka. Waan naxay markii hore, hadda aad ayaan u xanaaqsanahay. Waxaan ku qaatay tobankii sano ee la soo dhaafay Indianapolis sidii aan uga dhigi lahaa ganacsiyadaas kuwa guuleysta, ka caawiyo iyaga oo aan wax qiimo ah ku fadhiyin markay weydiistaan, kuna dhiirrigeliyo fursad kasta.
Ma aanan hor marin iyaga sababtoo ah waxaan u maleynayay inay lacag iga dhigeyso. Waxaan u sameeyay sababtoo ah waxaan jeclaa daawashada shirkadaha guuleysta, dad badan oo shaqo hela, iyo daawashada gobolka oo koraya. Waxay ahaayeen saaxiibbaday, waxaanan jeclahay inay saaxiibbaday guuleystaan.
Yaad rabtaa inaad la shaqeysid? Ma dooneysaa inaad ku hareereysnaato dadka ku mashquulsan sidii ay dhibcaha u ilaalin lahaayeen, uga walwalsan lahaayeen waxa lagu leeyahay, ama waxaad heli doontid? Mise waxaad dooneysaa inaad la shaqeyso dadka og in sida ugu wanaagsan ee qof kasta oo naga mid ah u guuleysto, sida ugu fiican aan dhamaanteen u noqon doonno mustaqbalka fog?
Runtu waxay tahay inaan waqti adag ku qaadanayo dhiirrigelinta shirkaddaas marka xigta ee xaq u fursad ayaa soo socota. Hadda waxaan fahansanahay inay ii arkeen oo keliya qalab 'si tooda loo helo'. Taasi waa niyad jab laakiin waan ku faraxsanahay… Waxaan haystaa saaxiibo badan oo kale oo maanta ii faraxsan.
Waan hubin doonaa inaan daryeelo asxaabteyda marka hore. Dadkaasi waa kuwa aan doonayo inaan la shaqeeyo.
50 Khaladaadka Qorista ee Ku Sii Socda Hanashada Bloggers
Daraasadahaagu ma waxyeello ka badan kuwa wanaagsan baa?
Oktoobar 2, 2009 at 6:29 PM
Si fiican ayaa loo yidhi, Doug. Ganacsigu waa ka badan yahay ganacsiga oo keliya. Waa cilaaqaad.
Oktoobar 3, 2009 at 4:40 AM
Qaybo weyn Doug. Waan kugu raaci kari waayey wax badan.
Oktoobar 4, 2009 at 9:30 PM
Waxaan mar labaad ku hambalyeynayaa adiga oo ka degay fursadda, adiga iyo saaxiibbaday kale ee ku jiray. Waa wax aad u xiiso badan inaad aragto ganacsigaaga oo koraya! Kaliya waligaa ha weynaan si aad uhesho @thebeancup annaga (oo waxaan kusii adkeyn doonaa koobabka keega!).
Oktoobar 5, 2009 at 3:12 PM
Waxaan rajeyneynaa caawimaad ka timid boostadan, shirkadda su'aasha laga qabo inay dib u soo noqon doonto. Xiriirrada ayaa sidaas sameeya waqti ka waqti.